Uyaxebuka ekhanda ekhaya usawoti
Njalo girl ufuna ukubheka emangalisa! Awudingi ukuba izigidi. umzimba uzilungise futhi izinwele - isisekelo i ukubukeka ekhangayo. Akubalulekile bayishiye inhloko-dolobha e salon ubuhle. Kungaba kwenziwe izinqubo elula nephumelelayo bebodwa. I ekhanda njengoba phi nye ungqimba we epidermis idinga ukunakekelwa. amathuluzi efakazelwe buyokwenza sezinwele eliphathisa ekhaya. Le nqubo ngeke ngcono umzimba - izinwele zakho akhanye, ngcono impilo yakho futhi uzokunika umuzwa ukuziqhenya umnini wayo.
Uyaxebuka akuseyona ukwelashwa angavamile. Wathuthela ku esigabeni edingekayo. Kulula kanjalo njengoba ibhulashi amazinyo akho noma ukubeka ebusweni okunomsoco buso. Uyaxebuka ekhanda ekhaya kabili ngonyaka kungaba kwenziwe. I sezinwele echayeke ukucindezeleka njalo. Uthuli, ukungcola kanye nemikhiqizo isitayela wakha ngongqimba. Izimo zezulu futhi zibulale isimo sezinwele. Ngokuhamba kwesikhathi, iqala ikhasi off futhi yakha dandruff. Lo mkhuba kubuhlungu ngempela futhi ebukekayo. Uyaxebuka ekhanda ekhaya kusiza ukuqeda loko. Izinwele kangcono ayegcwele oksijini, uma ususa bonke abafileyo izinhlayiya isikhumba.
Salt - ithuluzi enkulu
Inqubo ngokuhlanza isikhumba ekhanda ku gumbi akuyona ezishibhile. Ungathenga amathuluzi esikhethekile uyaxebuka futhi yenze eyakho. Kodwa okungcono ikhambi lemvelo kokungenela ezinjalo - usawoti. Ngezinhloso yezimonyo ilungele usawoti phansi encane noma naphakathi. izinhlayiya ezinkulu zingase ona isikhumba. Thatha isikhwama lesi, udinga ukulungisa slurry, futhi ihora isikhathi khulula. Abambalwa wezipuni usawoti uthele umthamo ofanayo amanzi. Ubude obuphakathi nendawo izinwele edingekayo nezinkezo ezine. Govuza isixazululo bese uqalisa ukunyakaza mnene bagcobe ku izimpande izinwele. ilula kakhulu futhi kufinyeleleke kuwo wonke umuntu enze sezinwele eliphathisa ekhaya. Massage imizuzu eyishumi, ukusebenzisa usawoti slurry. Khona-ke, shiya imizuzu embalwa futhi hashaza imoto. Lokhu uyaxebuka mechanical Uyokwanelisa ngisho nomcwaningi inveterate. Unwele usho double ngiyabonga!
Ukuze uthole samuntu kahle mix usawoti nge imoto noma izinwele namafutha. Uyaxebuka ekhanda ekhaya usawoti izinwele enempilo, ngibanike ukubukeka yobuhle futhi ekhangayo.
Sea usawoti - onesixazululo sazo zonke izinkinga
Sea usawoti - kuyinto option best for uyaxebuka. Ngaphezu ekuhlanzeni isikhumba kusukela ezinhlayiyeni engadingeki futhi izinsalela izimonyo, kuyoba ukufeza neminye imisebenzi:
ukusheshisa ukukhula izinwele;
liyosula oily, isikhumba okunamafutha;
"Awaken" okhatheleyo, ama ukuwozela;
Sea Usawoti abacebile izakhi trace adingwa umzimba. Iodine, insimbi, zinc - zonke izingxenye eziwusizo basuke bengabangane bengcebo zasolwandle ingekho ohlwini. Isibili uyajabula ukuthi kubiza ngisho nesenti. Sea usawoti angathengwa at ekhemisi njalo futhi wenze ekhanda njalo eliphathisa ekhaya. Izinwele bayothola ayebuthaka, amandla, luyokhula ngokushesha kakhulu kunokujwayelekile.
Kukhona amacala ukuthi usawoti asifanele ukusetshenziswa. Hypersensitivity nesikhumba ibuthaka ikhanda zikwenza ukusebenzisa izipho bemvelo. Khona-ke kufanele uvakashele isitolo. brand abaningi abadumile ukunikela izinwele bubuhle ubulili enempilo ngosizo amathuluzi akhethekile. Londoloza kulokhu ngeke kukusize ngalutho kuso. Peelings zihlukaniswe mechanical futhi amakhemikhali. Inketho yokuqala nje esusa isikhumba kusukela ukungcola zanqwabelana futhi begcoba ngokusebenzisa microgranules. ejenti Chemical ukusiza ukuxazulula izinkinga eziningi ezinkulu sezinwele. Dandruff, nezinwele, izinwele buthuntu futhi ezingaphili umane ecelwa ukuba aqhube ikhanda uyaxebuka isikhumba ekhaya. Ukwakheka lezo zimali zihlanganisa izithako ezinkulu asebenzayo. Scrubs, uketshezi, amashampu elihlanza - isinqumo omkhulu.
Nomaphi lapho ithuluzi obakhethayo, udinga ukuyisebenzisa ngokuqapha. Phela, esikhundleni okuhle kungaba yingozi izinwele zakho. Qiniseka ukuthi ukwenza ukuhlolwa kuvelana izingxenye ekwakhiweni. Sebenzisa imali ezincane esikhumbeni obucayi ubuke amahora. Uma kungekho ukulunywa futhi ububomvu kungenziwa wagcoba kalula ekhanda kusho.
Siza wenze iphutha futhi ukhethe ithuluzi elifanele ukwenza eliphathisa ekhanda ekhaya, ukubuyekezwa. Ngemva ukusetshenziswa lesi simangaliso yezimonyo wena njalo, ngisho nakanye nje. Abesifazane abaningi ababenza lokhu inqubo basutha ne umphumela futhi wabhala ngayo ukubuyekeza kwabo.
Isakhiwo cishe nganoma iyiphi indlela ukuze exfoliate isikhumba zihlanganisa amafutha abalulekile. Lokhu kwenza eliphumelelayo kathathu. Wonke umuntu uyazi amandla kanye amathuba of amafutha zemvelo ezibalulekile. Ayikho ulwazi olukhethekile akulula kanjalo afeze eliphathisa ekhanda ekhaya. Ungadliwa zihlukene. Incumbe ka uLwandle Lukasawoti, okuyinto bagcobe ku ekhanda, kungenziwa ahlanganiswe lamafutha zikagamthilini, orange, Mint, e-lavender. Uma sinezela ukuxubana kancane emhlabathini irayisi kanye vitamin E capsule, uthola cocktail kakhulu izinwele.
Zilungiselele for inhlanganisela ikhasi - Kujabulisa ngempela. Sebenzisa cocktail ewusizo ezifana kangcono izinwele ezimanzi, kungenjalo bayokudla uthole bedidekile futhi Strand ehlangeni ku izigaxa.
Feza inqubo, kuyinto efiselekayo kwi ikhanda ezingcolile. Ngakho, amanoni uhlala imikhiqizo isitayela, izintuli nokungcola kweso zisuswe, futhi ingozi ukulimaza isikhumba ukunciphisa. izingoma Iphele, wathenga esitolo, isicelo ngokusebenzisa izinwele njengo-buso. Izinwele zizosulwa futhi ngeke zithole Ukubengezela futhi ukubukeka enempilo. Izinwele izobukeka brand iwigi okusha!
Enye yezindawo eziyinhloko lichaza ekwakheni imikhiqizo yezimonyo kuthatha nobumba. Blue, omhlophe, obomvu - ngamunye yayo ezinhle! Thenga isikhwama ubumba eluhlaza ekhemisi uhlanganise ngosawoti incumbe for uyaxebuka sezinwele. Vumela sokunika for isigamu sehora bese uqale inqubo emnandi. Clay ine umphumela isinqandakuvunda futhi elwa namagciwane. Ungakwazi silisebenzise ubude lonke izinwele.
Excellent khuhla sthandwa ingalungiswa besebenzisa izinhlamvu zekhofi. Fake ugaye kweshumi nangangesihlabathi fresh, ikhofi elimnandi. Engeza ezimbili wezipuni imoto bese uqale ngobumnene ukukuthinta ingxube zingene sezinwele. Kanye ngesonto, thatha ihora nesigamu kuya sindiso izinwele!
Azonakekela izinwele zakho bese umzimba, umphumela nemizamo yakho iyoba ngaphezu okulindele!
"Walnut" umbala. Ukuze ivumelane le umthunzi izinwele?
Okuhle izinwele imaski ekhaya: zokupheka kanye nokubuyekeza
Curls esigcawini. Izindlela ukudala namathiphu
Umbala imoto "Tonic": kanjani ukuyisebenzisa?
Okufanele ukwenze lapho izinwele Umqansa
Izandiso eyelash (mink): ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ukubuyekezwa. eyelash Studio
Indlela ukukhubaza McAfee: Antivirus Software
Hay fever - a ... Ukwelapha izimpawu ethimulisayo zokuvimbela
Clove - yeziqholo, ayelapha okuyinto abeve bethandeka
Pheochromocytoma: Izimpawu kanye Sifo
Racer "Formula 1" Bryus Maklaren: Biography, izimpumelelo amaqiniso athakazelisayo
Zokungcebeleka Elihle Kazakhstan
INkosi yaseNgilandi uGeorge 6. I-Biography kanye nokubusa kweNkosi George 6
Amaphilisi e-Bellalgin: izinkomba zokusetshenziswa nokufana
Ungenzenjani phambi kwamehlo kanjani ukuhlanza ekhaya?
Electronic Ugwayi Smokoff: kanjani ukuyeka ukubhema.
Owenza umuntu-Virgo embhedeni futhi uthando kanjani?